Indlela yokuphatha ukuthuthukiswa kweWebhu ne-SEO ngendlela engcono kakhulu?
Uma ukukhuthazwa kwakho kwi-inthanethi ku-intanethi ukubheja okuningi emgwaqweni osebenzayo njengamandla okuthutha, kufanele ucabangele le ngxoxo emfushane elandelayo. Ngikholelwa ukuthi yonke imikhankaso yokukhangisa ye-intanethi kufanele ihlale incike ekuthuthukiseni kweWebhu ne-SEO, kokubili isandla esiseduze. Ake sibhekane naso - Usesho lwe-Engine Optimization luyengeziwe mayelana nokucwaninga kwegama elingukhiye, lisekelwe ngecebo elihle lokukhangisa okuqukethwe. Kodwa kunamanje izinto eziningi zobuchwepheshe zivame ukuza ngemuva kwendawo. Kodwa ikakhulukazi lezo zinkinga zobuchwepheshe ziqamba zonke ikhasi lewebhu elibalwe kuhlu lwe-SERPs. Ngisho ukuthi uma wenza i-SEO yakho, kufanele uhlale ucabangela inqubo efanele yokubhala ikhodi yakho yewebhu, kusukela ekuqaleni.
Yamukelekile ukufaka inkomba
Into yokuqala okumele yenziwe kokubili ikhasi lewebhu, nokuthuthukiswa kwe-SEO zonke izingxenye zewebsite yakho zifinyeleleka okungenani ukufaka izinkomba, ngisho ukuthi akukho lutho lokuvimbela ama robot ahambayo kusukela "ekufundeni" zonke izingxenye zedatha yakho yokuqukethwe. Ngokwenza ngale ndlela, ngincoma ukusebenzisa umyalo othi "Ukulanda" kusigaba se-Crawl se-Google Search Console ukuze ubuke ukubukeka kokuqala kwewebhusayithi yakho, kusukela ngombono wezinjini zokusesha. Kukhona ukusikisela okuyisisekelo esisodwa lapha - zama ukugcina konke ngefomethi ye-HTML, vele ugweme ukusebenzisa i-Flash noma i-Silverlight kumakhasi akho wewebhu ebaluleke kakhulu. Uma konke kubukeka kunembile, futhi iwebhusayithi yakho ingabonakali okungenani, ngezansi uzobona amathiphu ambalwa okuthola ulwazi olungcono lomsebenzisi, kanye nokukala okuphezulu okuzokwenziwa yizinjini zokusesha.
Yiba nama-URL ahlanzekile
Ama-URL akho yekhasi lewebhu akhombise ukubaluleka kokubalulekile, kokubili ngokuthuthukiswa kweWebhu ne-SEO, nokuthola ulwazi olungcono lomsebenzisi. Yenza ama-URL akho kube lula ngangokunokwenzeka ukuze 'aqondwe' ngamarobhothi okusesha, kanye nokufundwa ngabasebenzisi bangempela. Lahla noma iyiphi idatha ye-URL engadingekile, engase idale ukudideka ku-Google ngokwayo noma kubantu abavakashela amakhasi akho wewebhu. Kusuka kolunye uhlangothi, ukungabi nokusebenza kwama-URL akho kuzokwenza abantu bangene kancane ukuze bachofoze, bangasho ukuthi babelane ngakho. Ngesikhathi esifanayo, izinjini zokusesha zingase zivele zibhekane nezinkinga ezithile lapho "ukuqonda" kuhambisana nalokho okushiwo igama elingukhiye.
Ngokubheka ikhasi elifanele lewebhu nokuthuthukiswa kwe-SEO, thola ama-URL akho alungiselelwe yimingcele elandelayo:
Njalo iwebhu I-URL yekhasi kufanele ibe yifushane futhi ifundise ngangokunokwenzeka. Ngincoma ukufaka ama-URL akho ngamagama angukhiye kanye namagama asemqoka afanelekayo, ukuze afanelane nesihloko sakho sewebhu.
Ungalokothi ulandelwe ama-URL akho ngamagama angukhiye, gcina indlela yokukhomba ngokucacile ngangokunokwenzeka. Ukwenza kanjalo, khumbula ukukhipha amagama okuma kuzo zonke izindleko (njengalabo abavame ukukwenza: ",," "," "ku," "a," njll. )
Sebenzisa njalo ama-hyphens ukuhlukanisa ukulandelana kwamagama kuma-URL akho. Khohlwa mayelana nokugcizelela, njengoba izinjini zokusesha aziqapheli neze. Lokhu ngokwemvelo kuletha ubunzima obunzima bokubamba nokukhipha.
Londoloza ukuhlelwa kwegama eliyisihluthulelo esifanele ngokufaka amagama akho angukhiye ebaluleke kakhulu ekuqaleni kwe-URL ngayinye. Khumbula, ukuthi ngokwezifiso zabo, i-bots engine yokusesha ibeka kakhulu ukugcizelela kulabo abazoba yiziqalo zokuqala.
Ngendlela, bekuyoba nesinye isizathu sokugcina ama-URL akho afushane ngangokunokwenzeka,. e. , ukugcina nokwandisa isisindo esiphelele samagama akho angukhiye kuma-URL. Ngesikhathi esifanayo, noma kunjalo, kabusha kabusha ama-URL akho ngokwemvelo, njengokungathi ayeyizingcezu zokubhala kwakho kokuqukethwe. Ukwenza kanjalo, uzothola noma yikuphi ukugaxekile noma izinkinga zokuqukethwe ezincane ezanciphisa kancane Source .